Fikojakojana ny lalana : Natelin’ny CUA aiza ny vola ho amin’ny fanamboarana? -
AccueilRaharaham-pirenenaFikojakojana ny lalana : Natelin’ny CUA aiza ny vola ho amin’ny fanamboarana?
Efa tsy rariny intsony mihitsy. Tapitra potika sy simba ny lalana eto an-dRenivohitra ankehitriny. Toa mitazam-potsiny ny zava-misy anefa ny eo anivon’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra fa tsy mandray ny andraikitra tandrify azy.
Efa tsy misy mandeha amin’izay laoniny intsony mihitsy ny fitantanana ny tanànan’Antananarivo Renivohitra. Tsy misy izay tsy mitaraina mantsy amin’ny fahasimban’ny lalana eto amin’ny Renivohitr’i Madagasikara ary ny tena olana, mampiteraka fitohanan’ny fiara sy mampiteraka lozam-pifamoivoizana. Tapitra simba ny lalana eto Antananarivo amin’ireo faritra rehetra. Vantany vao nilatsaka nisesisesy mantsy ny orana, avy hatrany dia feno lavadavaka ny lalana rehetra. Mijaly ny mpampiasa lalana, eny fa na ireo mamonjy toeram-piasana sy toeram-pianarana aza mijaly noho ny fitohanana lavareny maharitra ora maro noho io fahasimbana io.
Voalaza anefa, fa nahazo vola mitentina 1 miliara Ar tamin’ny fanjakana, tamin’ny alalan’ilay antsoina hoe “Fonds d’Entretien Routier” na ny FER, ny Kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA) tamin’ny andron’ny Tetezamita. Taty aoriana, izany hoe, amin’izao fotoana izao, tsy nampiseho ilay fahavononana amin’ny teti-bolany mba hahafahan’ny fanjakana manampy azy ireo amin’ny fikojakojana ny lalana intsony ny CUA. Nohazavain’ny tompon’andraikitra iray teo anivon’ny minisiteran’ny Fitaterana fa natao hikojakojana sy hanamboarana ireo lalana simba ny vola fanampiana ny CUA.
Hatreto anefa, tsy hita taratra izany fikojakojana sy fanamboaran-dalana ataon’ny CUA izany. Tsy misy hafenina fa porofo mivaingana hita maso ny fahapotehan’ny lalana eto an-dRenivohitra ankehitriny.
Hita taratra amin’izany ny fitiavam-bolan’ny Ben’ny Tanàna ankehitriny, Lalao Ravalomanana, sy ny ekipany. Natao tohatra fiakarana sy fitadiavam-bola sy tombontsoa fotsiny ihany ny fitantanana ny kaominina fa raha mikasika ny fanatsarana ny tanàna, tsy misy zavatra mivaingana azo tsapain-tanana aloha, hatreto. Tsy vitan’ny famarotana ireo tanim-panjakana amina olon-tsotra , fangalàna sy fitakiana vola etsy sy eroa amin’ny vahoaka (parking, hetra, “permis de construire”, “permis de demolition”, sns) fa hatramin’ny volam-panjakana tokony hiasana atelin’izy ireo avokoa. Raha ny marina, tokony hisy ny fitsirihana ny fitantanam-bola eo anivon’ny CUA mba hisian’ny mangarahara satria na ireo mpanolontsaina monisipaly aza tsy mahalala intsony ny fitantanam-bola eo anivon’ny CUA.